Nkọwa na ọdịiche dị n'etiti QGIS na ArcGIS - Geofumadas
Ndị enyi GISGeography.com emeela ihe bara ezigbo uru nke ha jiri GQIS tụnyere ArcGIS, na ihe ọ bụla na-erughị isiokwu 27.
O doro anya na ndụ nke ikpo okwu abụọ a adịghị njọ, na-atụle na mmalite nke QGIS ụbọchị malitere na 2002, naanị mgbe mbipụta ikpeazụ nke ArcView 3x pụta… nke esonyerịrị ọtụtụ njem.
Obi abụọ adịghị ya, anyị ahụtụbeghị ntozu oke na nsogbu nke okwu Geospatial dị ka nke ndị ọrụ nke ngwọta abụọ a nwere. N'otu aka, ESRI na-akwado site na ntụpọ nzuzo nke ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị afọ 40 n'ahịa, yana uru ịbụ onye na-ajụ ase nke bịara mee ka ọhụụ ọhụụ pụta site na ịre ahịa na ọhaneze na-abụghị ọkachamara; ebe QGIS bụ usoro kachasị na usoro GIS, nke jisiri ike iji ikike OpenSource niile, na-achịkwa obodo nke ndị ọrụ afọ ofufo na-eduzi kamakwa na ọkwa ọkachamara dị elu.
N'ozuzu, ntanye ahụ na-enye anyị ọkụ dị ọkụ n'akụkụ ụfọdụ dị ka:
1. QGIS nwere uzo iji mepee ụdị data ọ bụla.
2. Ha abụọ na-achọ ime ka ihe ngosi dị mfe maka onye ọrụ njedebe, ọ bụ ezie na QGIS ọ dịghị mfe ma ọ bụrụ na anyị echee na ọgaranya bụ plugins.
3. Nyocha data dị n'etiti QGIS Browser na ArcCatalog na-adọrọ mmasị, mana ha anaghị adaba ma ọ bụrụhaala na ha dabere na ịdị adị nke metadata. O siri ike ịchọta mgbe niile na data ahụ.
4. iningbanye tebụl na-arụ ọrụ na ha abụọ, na-enwe obere uru QGSIS.
5. Gbanwee ma gbanwee usoro nhazi. A nabatara ha abụọ iji mee atụmatụ obodo na iji ụgbọ elu, ọ bụ ezie na uru ahụ bụ na QGIS mechara jisie ike gụọ ntule sitere na faịlụ .PRJ na-enweghị njehie.
6. Nnukwu ngwa agha nke data ịntanetị na ArcGIS Online bụ okwu na-echere maka QGIS na na ngwa mgbakwunye OpenLayers na-enye ọtụtụ ohere dị na mbara igwe mana enweghị ọtụtụ ihe.
7. Geoprocessing karịrị QGIS, mana ọ bụghị n'ihi ArcMap enweghị ya, mana n'ihi na ọ dabere n'ụdị ikikere dị, yabụ enwere ike iji ọrụ dị iche iche rụọ ọrụ. N'ezie, n'etiti ọtụtụ ngwaọrụ ọ ga-ekwe omume ịla n'iyi tupu ịnwale ha niile, ọ bụrụ na anyị echebara usoro ị ga-arụ na ntanetị nke GRASS na SAGA nwere, nke anyị ga-achọrịrị ịnwe otu ngwa.
N'ezie, nke a bụ ọnọdụ nke na-enweghịzi ike na ngwanrọ ngwanrọ kama ọ nwere ụdị azụmaahịa. Dika QGIS di n'okpuru ikike GPL, ihe nile di.
8. ofwa nke plugins sara mbara na ikpo okwu abụọ. Ọ bụ ezie na QGIS sara mbara na nke a, ebe enwere plugins maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, ihe siri ike bụ ihe ArcGIS Marektplace na-eme ka ọ dị mfe, ebe ọ bụ na enwere ihe ngwọta maka ihe niile nwere usoro iche iche dị mfe ịchọta. N'ezie, ị ga-akwụ ụgwọ.
Ọ bụ ezie na AGIS bụ igwe na-agbanyeghị ike, ọ naghị enwe ụdị ngwaọrụ ESRI pụrụ iche.
9. Raster data management gafere karịa ArcGIS. Ọ bụ ezie na QGIS + GRASS na-enye ọgụ, enwere ihe mgbe ArcGIS na-eme ka ọ dịrị gị mfe; ma ọ bụrụ na ọ bụghị site na ụkpụrụ agbakwunyere, site na nsogbu nke ndakọrịta nke plugins n'ihe metụtara nsụgharị ndị na-adịbeghị anya.
10. Enweghi ike iji ArcGIS Geostatistics ngwaọrụ tụnyere. Ha abughi nani oru, kama ha muta.
11. Site na data LiDAR, mmadụ kwesịrị iche echiche, maka na ebe ụfọdụ na-atụ aro na ArcGIS agabigala, ndị ọzọ na-ekwu na ESRI na-eche itinye nnukwu usoro nke onwe ya.
M na-atụ aro ka ị lee anya ma tinye ya na nchịkọta gị, n'ihi na ihe karịrị na-achọ ichebe ngwá ọrụ (nke ga-abụ nke kachasị ama), jiri ihe yiri 27 tụnyere akụkụ dịka:
Gọọmentị arụ ọrụ (Onye Nwepụta Ihe)
Ngwa ahịa ahịa ala ikpeazụ
Nkọwa na akụrụngwa
Akpaaka nke na-aga n'ihu na map
Map ndị a na-emegharị
Na-edezi data tabular
Nhazi XY na ngbanwe
Mgbanwe nke ụdị ọdịdị geometry
Na nkenke, ọ bụ ọrụ siri ike dugara n’isiokwu a. N'ọtụtụ akụkụ, ọ ga-achọ omimi dị omimi karị, nke naanị ndị maara ihe niile na-arụ ọrụ nke ArcGIS na mgbatị nke plugins QGIS maara. Otú ọ dị, ihe na-eju afọ:
Anyị ahụtụbeghị ụdị agha Epic na software GIS dị ka nke anyị na-ahụ ugbu a.
Iji gụọ isiokwu zuru ezu, lee njikọ ahụ.
Site n'ụzọ, ana m atụ aro ka ị debe ndekọ nke akaụntụ ahụ @GisGeography, na anyị ga-agbakwunye Top40 Geospatial Twitter.
Previous Post«Previous Ndebanye aha na Cadastre na ihe gbasara otu National Transactional System
Next Post Qgis - Ihe atụ nke ezigbo omume na ụdị OpenSourceNext »
2 Azaghachi na "Nkọwa na ọdịiche dị n'etiti QGIS na ArcGIS"
elva kwuru, sị: